I-China Henscoqi 8 Iipakethi zokuSusa iBhotile, i-3.38oz / 100ml Ibhotile engenanto, iMoto yokuHamba encinci yokuCoca iiBhotile zeZinto zokugcwalisa Iziqulatho ze-Mist Bottles Sula iiBhotile zokuHamba ze-Oiri ezifunekayo, iPerfume, i-M / U Remover fektri nabaxhasi | Jin Guan Yuan
Iipakethi zeHenscoqi 8, I-Bottle ye-Henscoqi, i-3.38oz / 100ml, kunye ne-Miniml yokuThulula ibhotile engenanto, ubungakanani bokuhamba kwisitayile esineeMotile zeebhotile ezicacileyo zokuhamba kwi-oyile eyimfuneko, i-Perfume, i-M / U Remover
Iipakeji zibandakanya: I-12 Pack 60 ml ye-Amber Glass Bottles, i-14 Fine Mist Sprayers kunye neThuli cap, 1 Ibrashi, ii-Funnels ezi-2 zeplasitiki, iilebheli ezingama-24 kunye nezi-3 zeDropiki zeplastiki.
Izixhobo eziGqwesileyo: Izixhobo zokuCoca ezinye ukuze zitshintshwe, iilebheli zokumakisha, ii Funnels kunye neepipetere zokugcwaliswa kotywala, kunye nebrashi yokucoca.
Ubungakanani obuncinci: Ugqibelele sisiqholo sakho, iioyile ezifanelekileyo. Ngokufanelekileyo ukuthatha uhambo, kwipikniki.
Iiglasi zeAmber zikhusela ngokuchasene nokuyingozi yeeradi ze-UV.
Ukupakisha okukhuselekileyo: Gquma iibhotile ngokukodwa ngebhabhuli ethambileyo. Uya kufumana iibhotile zakho ngaphandle komonakalo.
【Ukugcina iindleko- Ukuseta iibhotile ezingama-48 zokuwisa imehlo ngombhobho wokudiliza kunye neebhalbhu zerabha ezaneleyo ukugcina ioyile, iziqholo okanye obunye utywala. Zimbini izixhobo zemidlalo zeplasitiki MAHHALA ziya kukunceda ugqithise izinto ezingamanzi endaweni yokuhlanjwa kweebhotile zeglasi.
Ukukhuselwa kwe-UV】 Iibhotile zethu zebhotile ziya kuprinta ngokufanelekileyo imisebe eyingozi ye-UV ukukhusela iioyile zakho ezifanelekileyo ekungathatheni amandla ngokukhawuleza.
Proof Ukhuseleko kunye nobungqina obunqabileyo】 Iglasi ekhethwe ngononophelo ekhetheni ngononophelo ekwenza ukuba iibhotile zethu ezincinci zibe mtyibilizi, zigudileyo kwaye zingagungqisi. Umlomo wokugqitywa kwebhotile yesileyi ungqamana ne cap emnyama, ehambelana ngokuqinileyo kwaye inokuthintela nakuphi na ukuvuza kwamanzi.
【Kulula ukuyithwala】 Ibhotile yeglasi nganye ye-1oz / 30ml ibandakanya amanyathelo aphezulu: 1.2 "(D) x 4" (H), ubungakanani obufanelekileyo besiqholo sakho, ioyile efanelekileyo. Kulula uphathe ingxowa yakho okanye ibhegi yokuthatha ukuze uhambe okanye upende.
Ukusebenziseka kwakhona】 Uyasebenza kwakhona, uyaphinda, u-eco-friendly kwaye uyasebenza ngebhotile yeglasi nge-dropper, zizipho ezifanelekileyo kumthandi weoyile oyimfuneko, kubahlobo okanye izihlobo. Nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi ukuba ufumana iimveliso zethu nangawo nawuphi na umonakalo
Edlulileyo: Ivenkile enkulu yokutshiza ibhotile yotywala yangaphantsi kwebhotile emdaka emnyama isibulala-zintsholongwane isitya sebhotile yesentloko yentloko yeglasi
Okulandelayo: Iipakethi zeHenscoqi 8, I-Bottle ye-Henscoqi, i-3.38oz / 100ml, kunye ne-Miniml yokuThulula ibhotile engenanto, ubungakanani bokuhamba kwisitayile esineeMotile zeebhotile ezicacileyo zokuhamba kwi-oyile eyimfuneko, i-Perfume, i-M / U Remover
Iglasi yezipho zeglasi
Iglasi yeJar Cosmetic
Ivenkile enkulu emnyama ethe matte ebalulekileyo yebhotile ye-oyile ...
I-24, ecacileyo, i-10 ml ye-Glass Roll kwiibhotile ze-Perfume ...
Isiseko sokulawula ibhotile yesileyi somlomo ...
Ivenkile enkulu ethengisa i-100ml yebhotile yotywala yangaphantsi ...
I-Amber yeglasi yokutshiza ngeebhotile ezineeLebhu (2 ...
Iipakethi ze-Henscoqi 8 ze-Brayles, 3.38oz / 100ml Em ...
Iiglasi zeCosmetic zeGlasi kwiibhotile zeoyile, Iseti yeBhotile yeZithambiso, Iglasi yeJar Cosmetic, Iglasi yeBhotile yeZithambiso, Ibhotile ye-cosmetic, Iglasi yezipho zeglasi,